ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းက Dopamine - Your Brain On Porn ကိုထိခိုက်ခြင်းဖြင့် OCD ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေနိုင်သည်
၁ 'မေလ ၂၀၁၄ - အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်၏ပညာရေးဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာမှသုတေသနအသစ်အရစိတ်ကြွဆေး - မသန့်ရှင်းသောရောဂါတွင် neurotransmitter dopamine ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်သည်။OCD) နှင့်နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ (DBS) သာမန်အဆင့်ဆင့်ကပြန်လာကူညီစေခြင်းငှါ။
အစားအစာ, ဆေးဝါး, လိင်, လေ့ကျင့်ခန်း - - ဦးနှောက်အတွက်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှု၏ပဒေသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Dopamine မကြာခဏအပျြောအပါးများ၏လုပ်သူများအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သုတေသနပြုထက်ပိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု compulsive ဖြစ်လာသောအခါ, related dopamine လွှတ်ပေးရေး striatum, ဆုလာဘ်များနှင့်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းတစ်ဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌လစ်လပ်ဖြစ်လာကြောင်းပြသခဲ့သည်။
လေ့လာမှုအဘို့, စာရေးဆရာများ DBS ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သော OCD နှင့်အတူဆေးခန်းတည်ငြိမ်ပြင်ပလူနာစုဆောင်း ဆေးဝါးကုသခြင်းပညာ သာ. ကြီးမြတ်ထက်တစ်နှစ်။ အဆိုပါလူနာထို့နောက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine ရရှိနိုင်မှုကိုတိုင်းတာရန်သုံးတစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ် computerized tomography (SPECT) ပုံရိပ် Scan ဖတ်ခံယူ။
ဂျာနယ်တွင်အစီရင်ခံအဖြစ် ဟားဗတ်သူတို့ dopamine ရရှိနိုင်မှုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအကြားဆက်ဆံရေးကိုတိုင်းတာနိုင်အောင်, သုတေသီများဤလေ့လာချက်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်နာတာရှည် DBS အဆင့်ကာလအတွင်းလူနာကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးချဲ့ striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်ပြရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
DBS ပိတ်ထားလိုက်သောအခါလူနာရောဂါလက္ခဏာများ၏ပိုမိုဆိုးရွားလာပြ DBS ၏ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြင့်တစ်နာရီအတွင်းပြောင်းပြန်ခဲ့သော dopamine လွှတ်ပေးရန်, လျှော့ချ။
ဤသည်လေ့လာရေး striatal dopamine အချက်ပြတိုးမြှင့် OCD ကုသယဉ်လက္ခဏာတွေတချို့ကုထုံးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
ပထမဦးစွာစာရေးဆရာဒေါက်တာ Martijn Figee DBS ဦးနှောက်၏သော့ချက်ဒေသများရှိ binding အလယ်ပိုင်း dopamine အဲဒီ receptor လျော့နည်းသွားဟုပြောသည်။ သူက dopamine ဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေများအတွက်အရေးကြီးပါသည်ကတည်းက DBS OCD ခံစားနေရပြီးလူနာအတွက်ကျန်းမာအပြုအမူ restore နိုင်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါယုံကြည်သည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်မှုများအတွက်ရွေးချယ်ထားသောလူနာယခင်က dopamine system ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းရိုးရာ pharmacological ကုထုံးမှ Non-တုံ့ပြန်မှုခဲ့သညျ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် OCD များအတွက် DBS ၏ထိရောက်မှုကိုပု dopaminergic စနစ်၏တစ်ဦးနောက်ခံကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်၎င်း၏စွမ်းရည်နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
dopamine အတွက် DBS-related stimulatory တိုး obsessive-compulsive အပြုအမူတွေကိုကျော်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်လူနာများအားကူညီမှပေါ်လာသည်။
"ဒါဟာမော်လီကျူးကဦးနှောက်ပုံရိပ်ဆက်စပ် circuit ကို-based DBS ကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။ ဒီကုသမှုကိုအပြုသဘောလက်တွေ့အပြောင်းအလဲထုတ်လုပ်နိုင်သည့်မှတဆင့်ယန္တရားများသို့အလင်းကိုသွန်းစေခြင်းငှါမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ် "ဟုဒေါက်တာဂျွန် Krystal ၏အယ်ဒီတာကပြောပါတယ် ဟားဗတ်.
သူလည်းဒါဟာလုပ်ပေးခဲ့သူလူနာ dopamine-ပိတ်ဆို့ခြင်းတုံ့ပြန်ရှိမရှိသိရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပါလိမ့်မယ် "မှတ်ချက်ပြု antipsychotic ဆေးဝါးများ လေ့ OCD လက္ခဏာတွေများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောသည်ဤဆေးဝါးများတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်သောဤလေ့လာမှုမှာစာရင်းသွင်းလူနာထက် dopamine function ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံနှောင့်အယှက်ရှိသည်။
"မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်ဝတ္ထုကုသနေဖြင့်ပစ်မှတ်ထားခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါဦးနှောက်ထဲမှာအချက်ပြ dopamine အချို့လိုငွေပြမှုဒီရောဂါအတှကျအသမားရိုးကျကုသနိုင်ရန်လုံလောက်သောတုန့်ပြန်တားဆီးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ "